कभर्ड हल बनाउन धार्मिक महोत्सव – Sajha Bisaunee
कभर्ड हल बनाउन धार्मिक महोत्सव
सुर्खेत, २५ कात्तिक । सुविधायुक्त बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माणका लागि आजदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मध्यपश्चिमाञ्चल धार्मिक महोत्सव (महायज्ञ) सुरु भएको छ ।
सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय कभर्ड हल निर्माणका लागि रकम जुटाउन महोत्सवको आयोजना गरिएको हो । महायज्ञ मङ्सिर २ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।
स्वस्थ समाज र राष्ट्र शान्तिका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराकासाथ जिल्ला व्याडमिन्टन संघ सुर्खेतले महायज्ञको आयोजना गरेको हो । उनले प्रदेश नं. ६ को सम्भावित राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ४ हजार क्षमताको सुुविधा सम्पन्न कभर्ड हल निर्माण गर्नका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले महायज्ञको आयोजना गरिएको बताए । ‘अहिलेसम्म सुर्खेतमा इण्डोर खेल खेलाउने कुनै पनि पूर्वाधार नभएको अवस्थामा यो कभर्ड हल निर्माण भएपछि विभिन्न किसिमका अन्र्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘६ नंं. प्रदेशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो कार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व सुर्खेती जनता, खेलकुदप्रेमी, खेलाडी, राजनीतिक दल, संघसंस्था, शैक्षिक संस्था, सञ्चारकर्मी सबैको हो ।’ उनले जसरी भएपनि आउँदो दुई वर्षभित्र वीरेन्द्रनगरमा अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्ड हल निर्माण गर्न सबै जुट्नु पर्नेमा जोड दिएका छन ।
महायज्ञमा प्रत्येक दिन बिहान ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म योग विज्ञान शिविर, ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म पूजा र ८ देखि पाठ प्रारम्भ हुने छ । यस्तै, १० बजेदेखि ४ बजेसम्म कथावाचन हुनेछ भने साँझ ७ बजेदखि १० बजेसम्म थारु, हिन्दी र नेपाली भाषाका भजन किर्तनहरु गरिने महासचिव खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए । देवकोटाका अनुसार बुधबारसम्म ३ हजार कलश वितरण भैसकेका छन् । महायज्ञमा कथा वाचक गोविन्दशरण महाराज र मिरादिदीबाट हुने उनले बताएका छन् । राज्यले खेलको विकासका लागि केही गर्न नसकिरहेका बेला खेलाडीहरुको जागरुकताले हुन लागेको अभियानले राज्यलाई नै खेल क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराउने विश्वास लिएको उनले बताए । क्षेत्रीय स्तरको धार्मिक महायज्ञबाट करिब ५ करोड रूपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नयाँ निर्माण हुन लागेको कभर्ड हलमा योग र प्रणायाम गर्ने सुविधा, सभा सम्मेलन, भलिवल, बास्केटवल लगायतका इण्डोर खेल सञ्चालन गर्न सकिने छ । उक्त कभर्ड हल निर्माणका लागि २ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २५ कार्तिक २०७३, बिहीबार ०७:३८